::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather मन्त्रीज्यूले चोर डाँकालाई समातेर जेल हाले जस्तो गर्नुभयो : न्यौपाने (भिडियोसहित):: Rojgar Manch ::
बुधवार, २०७५ जेष्ठ २२ गते ०६:३६
प्रज्ञान न्यौपाने, पूर्वअध्यक्ष
लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरम
अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रायः ठप्प छ । मलेसिया रोजगारी बन्द छ भने अन्य देशबाट आउने डिमाण्डहरुमा पनि कमी आइरहेको छ । सरकारले ल्याएको मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ लागू भएपछि त ह्वात्तै डिमाण्डहरु घट्न थालेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउन थालेको छ । सिण्डिकेट र ठगी नियन्त्रण गर्ने भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एकपछि अर्को निर्णय गर्दा मेनपावर व्यवसाय नै धरासायी बनिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संकटमा पर्दासमेत उनीहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ मौन नै छ । पछिल्लो समय सरकारी कदमको विरोधका आवाज लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार फोरमले उठाउन थालेको छ । फोरमकै पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने सरकारको एकतर्फि निर्णयले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र बन्दको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । आफ्नै व्यवसायी संघलाई प्यारालाइसिस भएको बताउने न्यौपाने व्यवसायीहरु संकटमा पर्दा समेत संघ र यसका पदाधिकारी चुप लाग्नु रहस्य भएको बताउँछन् । तर व्यवसायीहरुका लागि अब लोकतान्त्रिक फोरमले साथ दिने उनको तर्क छ । उनै न्यौपानेसँग वैदेशिक रोजगारको पछिल्लो अवस्था र सरकारी कदमका बारेमा फणिन्द्र दाहालले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समय तपाईले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले व्यवसायीहरु अन्योलमा छन् । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ ऐन पनि आएको छैन । तर, नयाँ सरकार आएपछि केही राहत हुन्छ र जाने कामदारलाई पनि केही सजिलो तथा व्यावसायीलाई पनि सजिलो वातावरण बन्छ भन्ने ठुलो आशा थियो । तर, अहिले श्रम मन्त्रीज्यूले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा एकदमै बुझेर हो की नबुझेर हो एकतर्फी निर्णय गरिरहनुभएको छ । यस्ता निर्णयले सायद वैदेशिक रोजगार त बन्द हुन्छ नै होला हजारौ बेरोजगार नेपालीहरुको रोजगारीको अवस्थामा पनि अन्यौलता सिर्जना भएको मैले देखेको छु ।
अहिले मलेसियाको व्यासाय बन्द छ । मलेसिया सरकारले लागू गराएका प्रक्रिया पुरा नगरीकन नेपाली कामदार मलेसिया जान नपाउने अवस्था थियो, तर सिन्डिकेट लगाएको र अतिरिक्त आर्थिक भार थपेको भन्दै सरकारले यी प्रक्रिया खारेजीको घोषणा गरेको छ । अब मलेसिया रोजगारीको अवस्था कस्तो होला ?
पहिलो कुरा त मलेसिया जाने कामदारको विषयमा वा भनौ मलेसिया कुन तरिकाले गइरहेका छन् भन्ने अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । हामीले पनि विगत ३–४ वर्षदेखि मलेसियाको सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेका हौं । त्यतिबेला हाम्रा मन्त्रीहरुले चाहेर पनि गर्न नसकेको होकी वा मन्त्रीहरुको पनि यसमा मिलेमतो थियो भन्नेमा हामी पनि अन्यौलमा थियौ । अहिले नेपाल सरकारले एकतर्फी रुपमा यसलाई हटाएको छ तर अहिलेसम्म मलेसिया सरकारले यसप्रति प्रतिक्रिया नदिदा मलेसिया जाने कामदारहरुको श्रम स्वीकृति र भिसा स्टायम्पिङ पुरै रोकिएको स्थिति छ । जसले गर्दा सबैभन्दा धेरै नेपाली कामदार जाने मलेसिया रोजगारी अहिले बन्द भएको अवस्था छ ।
भनेपछि श्रम मन्त्रालयले चालेका पछिल्ला कदम उचित थिएनन् ?
मलाई जहासम्म लाग्छ मन्त्रीज्यूले सिन्डिकेट हटाउनुभयो त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, हटाउनु भन्दा अघि मलेसिया सरकारसँग एकपटक कुरा गर्नु पर्ने थियो । एकतर्फिरुपमा निर्णय गर्दा यसबाट मलेसिया जाने प्रक्रियाहरु के–कति अवरुद्ध हुनसक्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने थियो । आज लगभग एक महिना भइसक्यो मलेसिया रोजगारी लगभग ठप्प छ । उता सिन्डिकेट खडा गरेको र अतिरिक्त शुल्क असुलेको भन्दै जुन व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरिएको छ यो त झन सरासर इगो साध्ने काम मात्र भएको छ । भिएलएनको अध्यक्षलाई जेल हालेको स्थिति छ । अर्कोतिर जिएसजीका संचालकहरु, वायोमेट्रिकका अगुवाहरु बाहिर बसेर घुमिरहेको स्थिति छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा नेपाल सरकारले सबैलाई एउटै व्यवहार गर्नुपर्नेमा कोही कल्बमा गएर जिम र व्यायाम गरिरहदा कोही चाही जेलको चिसो कठघारामा बस्नुपरेको छ । यसलाई एकदमै सरकारले इगो साधेको जस्तो मैले देखेको छु ।
तर मलेसिया प्रक्रियाका नाममा खुलेका संस्थाहरुलाई अवैधरुपमा संचालन भएको र कामदार माथि अतिरिक्त आर्थिक भार थोपरेर ठगी गरेको आरोप लगाउदै व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेर थुनेको अवस्था पनि छ नि त ?
सबैभन्दा पहिला ति कम्पनी दर्ता गर्ने प्रावधान कसले सुरु ग¥यो र किन दर्ता गरियो खोजतलास गर्नुपथ्र्यो । तर, दर्ता गराएर, नेपाल सरकारलाई कर बुझाइएका कम्पनीहरुलाई सिण्डिकेट र ठगी नियन्त्रणका आरोपमा सफाउँदा मौका नै नदिई जेल हाल्नु हँुदैनथ्यो । पहिले उनीहरुसँग बुझेर, छलफल गरेर, पत्राचार गरेर बन्द गराउन आग्रह गर्न सकिन्थ्यो र अटेर गरे कारर्बाही गर्छौ भन्नुपथ्र्यो । जसरी अहिले एकैपटक सबैलाई ठगीको नाममा प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ यो एकदमै निन्दनीय छ । एउटा पेशा वा व्यवसाय गर्ने मानिसलाई थुन्ने अधिकार राज्यलाई हुँदैन । कम्पनी रजिष्ट्रारमा दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेर र राज्यलाई तिरेर चलिरहेको कम्पनीे बन्द गर्नुभन्दा पहिला मन्त्रीज्यूले तपाईहरुको कम्पनी यो–यो कारणले गर्दा बन्द गर्नुपर्ने हाम्रो ठहर छ भनेर पत्र पठाउन सक्नुहुन्थ्यो । त्यो पत्र पठाइसकेपछि उहाँहरुले छानबिनको प्रक्रियामा ल्याउनुपथ्र्यो ।
भिएलएन, जिएसजि, वायोमेट्रिकलगायतका संस्थाले कति पैसा लिन पाउने हो र यसले कति बढि उठायो भन्ने विषयमा मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाएर आधिकारिक जवाफ मागिनु पथ्र्यो । र यो सबै एउटा समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । त्यो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कारबाही गर्नुपथ्र्यो भन्ने हाम्रो माग हो । तर मन्त्री ज्यूले चोर डाँकालाई समातेर जेल हाले जस्तो गर्नुभयो । यो एकदम गलत कार्य हो । उहाँहरुलाई थुन्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई अहिले छैन । मुद्दा पनि कमजोर छ भन्ने मैले सुनेको छु । उँहाहरुलाई पहिला छोडेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुप¥यो र नेपाल सरकारले तुरुन्तै कुटनितिक पहल गरेर यसमा कति पैसा उठाउन पाउनुपर्ने हो अथवा पैसा नउठाई पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर कुटनितिक पहल गर्नुप¥यो । यो मलेसिया र नेपाल सरकारबीचको सम्बन्धको कुरा हो र छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधान गर्नुप¥यो ।
तर सिण्डिकेट हटाउने मन्त्रीज्यूको कदमलाई सबैले स्वागतयोग्य छ भनिरहेका छन् नि त ?
मन्त्रीज्यूले कस्को सल्लाहमा यो सबै गरिरहनुभएको छ कुन्नि तर, मलाई त मन्त्री ज्यू फस्नुभो कि जस्तो लागिरहेको छ । मन्त्रिज्यूले मलेसियामा चुनावपछि आएको नयाँ सरकार सिन्डिकेट विरुद्ध छ भन्ने बुझाईमा परेर ऊ भन्दा अगाडि आफुले यसको फाईदा लिन खोजेको जस्तो मलाई लाग्यो । मलेसिया सरकार भन्दा अगाडि आफुले हटाएमा त्यसको पुरा फाईदा वा जस मैले लिन पाउँछु भन्ने तर्क राखेर काम गर्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई । यत्रो वर्षसम्म नहटेको सिन्डिकेट उहाँले हटाउनुभयो यो स्वागतयोग्य छ । तर एउटै प्रकारका सिन्डिकेट जस्तै गाम्का पनि सिन्डिकेट नै हो । दशौँ वर्षदेखी गाम्काले १०–१२ वटा मेडिकलबाट एकतर्फीरुपमा मेडिकल गर्दैआईरहेको छ तर यसको विषयमा उहाँले एक शब्द पनि उच्चारण गर्नुभएको छैन । त्यो गाम्का नेपाल मन्त्रीज्यूको ज्वाँई या छोराको हो कि ? कोही आफन्तको होकी ? अथवा कोही आफ्नो नजिकाको मान्छेको हो कि ? त्यसकारणले गर्दा मन्त्रीज्यूले कि त सबैखाले सिन्डिकेट हटाउनुपर्छ होइन भने कोहिलाई काखा कोहिलाई पाखा गरेर कदम चाल्नु गलत हो । बरु कामदार नजानुपर्ने ठाउँमा नजालान् । सबै सिन्डिकेट हटाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
मलेसिया कामदार पठाउदै आएका व्यवसायीहरुसँग छलफल नगरी यस्तो किसिमको निर्णय भयो । यता नेपाल वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघ चुपचाप छ, संघको त सरकारको कदमप्रति समर्थन गरेको देखिन्छ त ?
हेर्नोस् म एउटा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे हो । हामी संघमा हुदा आफ्नै मन्त्रीको विरुद्ध पनि नारा जुलुस ग¥यौ । १८÷१९ दिन आन्दोलन ग¥यौँ । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दियौँ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा हामीले कुरा उठायौँ । तर, अहिलेको नेतृत्व वा संघ प्यारालाइसिस् भएको विरामी जस्तो छ । न बोल्न सक्छ न हल्लिन सक्छ । सायद उहाँहरुलाई कतैबाट प्रेसर छ कि ? या पार्टीमा कारबाहीमा परिन्छ कि भन्ने डर छ कि ? होइन भने व्यवसाय बचाउने हो भने यस्तो संकटको घडिमा खोई त संघको धारणा ? व्यवसायीको हकहितका लागि आवाज उठाउन र अफ्ठ्यारो परेको बेला सहायता दिन्छन भनेरै व्यवसायीहरुले जिताएर उहाँहरुलाई संस्थाको नेतृत्वमा पु¥याएको हो नि ।
भनेपछि संघले व्यवसायीहरुका पक्षमा केहि काम गर्न सकेन भन्न खोज्नुभएको हो ?
त्यो आम व्यवसायीहरुले भन्न थालिसके । खोइ त काम देखाएको ? अहिले व्यवसाय धरासायी स्थितिमा छ । काम गर्ने वातावरण नै छैन । एकातिर फ्री भिषा, फ्री टिकट भनेको छ तर कुनै पनि देशसँग श्रम सम्झौता गरेको अवस्था छैन । सरकार १० हजारभन्दा बढी लिन पाउदैन भन्छ यो अवस्थामा त्यो भन्दा १ रुपैया बढी उठाएपनि हामी व्यवसायी कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले पनि फ्री भिषा, फ्री टिकटमा नपठाए मेनपावर बन्द गर भनेर गर्नुप¥यो । सबै साथीहरुले मेनपावर बन्द गर्छन् । हामी पनि अर्को पेशा गर्न सक्छौं । यही पेशा गर्नु पर्छ भन्ने त छैन नि । बेरोजगार नेपालीलाई आफ्नै बलबुताले अवसर खोजेर हामीले विदेश पठाइरहेका छौ । एक–दुई जनाले गलत काम गरे भन्दैमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु ठग हुन, दलाल हुन, यिनिहरुले पैसा धेरै उठाएका छन् भन्ने जुन सरकारले सोचेको छ त्यसप्रति संघले खोई प्रश्न उठाउन सकेको ? अहिलेको संघले यो कुरा मन्त्रिज्यूलाई बुझाउन र छलफल गर्न सक्नुपथ्र्यो । यसमा म घोर निन्दा गर्छु र तपाईको मिडियामार्फत उहाँहरुलाई आहृवान गर्छु –‘यदि तपाईहरुले व्यासायीहरुको हकहितको बारेमा तथा जाने कामदारको बारेमा कुरा उठाउन सक्नुहुन्न भने हात उठाउनुहोस र हामीले सकेनौ भन्नुस । समाधान खोज्ने अर्को सक्षम व्यक्तिलाई व्यवसायीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नेछन ।’
यो अवस्थामा अब नेपाली कामदार मलेसिया कहिले जान पाउलान् ?
अहिलेको अवस्थामा मलेसिया रोजगारी एकदमै अन्योलमा छ । एक त मलेसिया सरकारले २०–२५% आप्रवासी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा नेपाल कति प्रतिशतमा पर्ने हो । दोश्रो कुरा मलेसियाले नेपाल लगायत १४ वटा मुुलुकहरुबाट कामदारको आपुर्ती गरिरहेको छ, त्यो कुरालाई नेपाल सरकारले मध्यनजर गरेर कुटनीतिक पहलबाट यस विषयलाई समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।